September 2018 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
विराटनगर , वैशाख १९ गते । प्रदेश नम्बर १ को राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउन सत्तारुढ दल नेकपाले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ । मुख्यमन्...
जनकपुरधाम, कात्तिक २५ गते । आस्थाको महापर्व छठअन्तर्गत आज पहिलो दिन नहाय–खाय विधि गरिँदैछ । चार दिनसम्म मनाइने छठ पर्वअन्तर्गत पहिलो दिनमा ...
विराटनगर , वैशाख १८ गते । अस्थायी रूपमा प्रदेश नं १ को राजधानीको रुपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिका स्थायी राजधानीको रुपमा स्थापित हुने...
प्रधानमन्त्री र डा गोविन्द केसीले भने- हामी दुवैलाई बचाउने डाक्टर एकै हुन्
काठमाडौं , कार्तिक १५ गते । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्यस्थिति बारे जानक...
9/27/2018 07:28:00 PM स्वास्थ्य
मौसमी रुघाखोकी ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरु बिरामी हुने गर्दछन्। यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखिने गरेको छ। वर्षा यामको शुरु तथा अन्त्य, जाडो यामको शुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुघाखोकी ज्वरो, इन्फ्लुएञ्जाका विरामी वढी देखिने गर्दछन्।
– ज्वरो आउने (१००.४ डीग्री फरेनहाइट भन्दा वढी)
– श्वास फेर्न गाह्रो हुने
– बच्चाहरुलाई झाडा पखाला समेत हुन सक्छ
– खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक, मुख छोप्ने गरौं।
– साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौं।
– पोषिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने गरौं।
– ज्वरो आएको व्यक्तिले नगुम्सिएको, हावा ओहोर दोहोर हुने कोठामा आराम गरौं।
– आनावस्यक रुपमा मानिसहरुको भीडभाड भएको ठाउँमा नजाऔं।
– ज्वरो रुघाखोकी लागेको विरामीको घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नभएमा आवश्यक उपचारको लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजाऔं।
– शंकाष्पद रोगी व्यक्तिवाट सकभर टाढै वसौं।
– आँखा, नाक तथा मुखमा अनावस्यक रुपमा हात नलैजाऔं।
– सकभर अरु व्यक्तिहरुसंग हात नमिलाउने, नमस्कार गर्ने।
– अरुले प्रयोग गरेका रुमाल, कपडा प्रयोग नगरौं।
– नाक, मुख छोप्दा प्रयोग भएका रुमाल राम्ररी धोएर वा सफा गरेर मात्र पुनः प्रयोग गर्ने।
9/27/2018 07:20:00 PM स्वास्थ्य
-मुटु शल्यचिकित्सक डा आचार्य मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत छन् , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
चिकित्सा शिक्षा विधेयक यो अधिवेशनबाट पास हुने सम्भावना न्युन, वर्षे अधिवेशन बिहीबार अन्त्य हुँदै
9/27/2018 07:14:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
डा केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा बिलम्ब
काठमाडौं , असोज ११ गते। संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को वर्षे अधिवेशन बिहीबार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुँदैछ। यससँगै डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार यही अधिवेशनबाट विधेयक पास हुने सम्भावना न्युन देखिएको छ।
डा केसीसँगको सहमतीपछि तयार भएको विधेयक संसदमा पेश गर्न भन्दा समितिले छलफलमै सिमित गरेपछि उक्त विधेयक यो अधिवेशनमा पारित नहुने देखिएको छ । आज अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले पेश हुने सम्भावना भएपनि पारित हुन भने सम्भव छैन । समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने अनि मात्र प्रतिनिधि सभावाट पारित हुँदै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुपर्ने भएकाले यो अधिवेशनमा सम्भव नदेखिएको हो । संसदमा मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयक समेत विचाराधिन रहेको छ । केही नेपाल ऐन विधेयकमा मार्फत दर्ता भएको मुलुकी संहिता संशोधन हाल प्रतिनिधि सभामा रहेको छ । उक्त विधेयक आजको वैठकले पारित नगरेमा अर्को अधिवेशनमा जाने छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अन्त्य र आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई अधिवेशन अन्त्यको पत्रमार्फत् जानकारी गराएको छ।
संसद् सचिवालयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन अन्त्यको पत्र प्राप्त भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । तर अर्को अधिवेशन बारे सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले कुनै निश्चित नरहेको उनले बताए।
बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले अधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधिबारे जानकारी गराएर अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्ने कार्यतालिका छ।
गत वैशाख २३ बाट शुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक आजसहित ७९ औंपटक र राष्ट्रियसभाको ६१ औंपटक बसेर अन्त्य हुन लागेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर एक चौथाइ सदस्यले बैठक आह्वानका लागि लिखित आग्रह गरेमा बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
9/27/2018 07:09:00 PM कला /साहित्य , स्वास्थ्य
दशैँको मुखमा चिनी आपूर्ति समस्या
9/27/2018 07:01:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौँ, असोज ११ गते । चाडपर्वको मुखमा सरकारले चिनीमा कोटा प्रणाली लागू गरेपछि त्यसको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने सम्भावना बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ सालमा एक लाख मेट्रिक टन चिनी मात्र आयात गर्ने कोटा तोकेपछि त्यसको स्वागत उद्योगपतिहरूले गरे पनि उपभोक्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
उखु किसानलाई रकम भुक्तानी गर्ने नाममा उद्योगीहरूको आग्रहमा चिनी आयातमा कोटा लगाएपछि उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्तावादीको दाबी छ । नेपाली चिनी उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्यले विदेशबाट आउने चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गरेर सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकार उक्त निर्णयमा पुगेको हो ।
यो वर्ष एक लाख मेट्रिक टनको कोटा पूरा भइसकेको छ । चाडवाड सुरु भएको छ । चाडवाडको समयमा चिनीको अभाव देखाएर कालोबजारी गर्ने अवस्था सिर्जना हुने उपभोक्तावादीको गुनासो छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ तर नेपालमा एक लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्र उत्पादन हुन्छ । जति अपुग छ त्यति मात्र बाहिरबाट मगाउने सरकारले नीति लिएको छ ।
तर सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भन्नुहुन्छ, दुई वर्षलाई नेपालमा जति पनि चिनी पुग्छ । उद्योगीसँग पर्याप्त चिनी छ । अब अझै चिनी उत्पादन गर्ने सिजन आउँदैछ । अपुग चिनी अनुदान तथा सहुलियतमा पाकिस्तान तथा ब्राजिल लगायतका देशबाट आउने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
भारतबाट नेपालसम्म चिनी ल्याउँदा सबै खर्च कटाएर त्यसको मूल्य करिब प्रतिकेजी ६५ रुपियाँ हुने गरेको देखिन्छ । जब कि नेपालमा उत्पादन हुने चिनीको कारखाना मूल्य मात्र प्रतिकेजी ५७ देखि ६० रुपियाँ हुनेछ । तल उपभोक्तासम्म हाइपुग्दा त्यही चिनीको मूल्य ७०–७५ रुपियाँ हुने उपभोक्तावादीको दाबी छ । अध्यक्ष अग्रवालले पनि कारखानाको मूल्य ५७ रुपियाँ प्रतिकेजी रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले विकल्प नसोची निर्णय गरेको र त्यसले चाडपर्वमा कालोबजारी हुने निश्चित रहेको बताउनुभयो । कोटा अनुसार एक लाख मेट्रिक टनले पनि नेपाली उपभोक्तालाई चिनी अपुग भए सरकारे के गर्ने त्यसको बारेमा अझै केही सोचेको छैन ।
पाकिस्तानबाट सस्तो मूल्यमा भित्रिएको चिनीका कारण उत्पादन गरेको चिनी बिक्री गर्न नसकेर उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकेको दाबी उद्योगी अग्रवालको रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, उद्योगीहरूले बजारमा पाकिस्तानी चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हामीले भ्याटबाहेक स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनीको मूल्य ५४ र भ्याटसहित प्रतिकिलो ६१ देखि ६२ रुपियाँ तोकेर बिक्री गर्ने गरेको छौँ ।
बजारमा अहिले चिनीको मूल्यमा एक रूपता रहेको छैन । कोटेश्वरमा रहेको भाटभेटेनीमा विदेशबाट आएको चिनीको खुद्रा मूल्य ५९ रुपियाँ रहेको छ भने त्यहीँको खुद्र पसलमा बजारमा अहिले पाकिस्तानी चिनी खुद्रामा ७५ रुपियाँ र थोकमा ६७ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
असोज ४ गते नेपाली चिनी व्यपारीले सरकारसमक्ष चिनीको थोक मूल्य ६८ रुपियाँ तोकेको छ । तीन तहमा जाँदाजाँदै त्यही चिनीको मूल्य ७१ रुपियाँ पर्न जान्छ तर पाँच दिन बित्दै अहिले त्यही चिनी ८५ रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको महासङ्घका अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ । चिनी कारखानामा उत्पादन भएको एक केजी चिनीमा ३३–३५ रुपियाँ लगानी परेको दाबी गर्दै उहाँले उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा त्यो चिनीको मूल्य ५० रुपियाँभन्दा बढी नपर्ने दाबी गर्नुभयो । तर सङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, सरकारले नै एक केजी चिनी उत्पादन गर्दा ६३ रुपियाँ लागत लाग्ने गरेको भनेको छ । तर हाम्रो हिसाबमा ६५ रुपियाँ पर्ने
गरेको छ । उखुको मूल्य नघटाएसम्म चिनीको मूल्य कम नहुने अग्रवालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि हामीले एक केजीमा ६–७ रुपियाँ घाटा व्यहोरेर चिनी बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ । पहिला १२ रुपियाँ घाटा थियो जब सरकारले आयातमा रोक लगायते अनि घाटा कम भएको छ । - सुरेशकुमार यादव , गोरखापत्र दैनिकबाट
9/27/2018 06:56:00 PM राजनीति
काठमाडौँ, असोज ११ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले बलात्कार, हत्या एवं हिंसामा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आजै अधिवेशन अन्त्य भए पनि यसपछि बस्ने अधिवेशनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो । सङ्घीयताको श्रेय मधेश आन्दोलनलाई जाने बताउँदै उहाँले यसको संरक्षणमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भौगोलिक अखण्डतालाई खलल पु¥याउन गरिने कुनै पनि गतिविधिमा आफ्नो दलको समर्थन नरहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । - रासस
9/27/2018 10:44:00 AM अपराध
9/27/2018 10:38:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
न्यूयोर्क, असोज ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ अधिवेशनमा भाग लिन प्रधानमन्त्रीद्वय ओली तथा मे यहाँ हुनुहुन्छ । उक्त अवसरमा नेपाल तथा बेलायतबीच शताब्दीयौँदेखिको मित्रता तथा द्वीपक्षीय सम्बन्ध स्मरण गरिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोगका कार्यवाहक राजदूत निर्मलराज काफ्लेले बताउनुभयो । उहाँले व्यापार, लगानी तथा पर्यटनसहितका बहुक्षेत्रमा सहयोग बलियो बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोगका कार्यवाहक राजदूत काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी, तथा नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । - रासस
9/14/2018 06:37:00 PM विश्व
वासिङ्टन, भदौं २९ गते । संयुक्तराज्य अमेरिकाले बिहीबार दक्षिण कोरियालाई बिक्री गर्न लागेको दुई अर्ब ६० करोड डलरमा नयाँ लडाकू विमान र क्षेप्यास्त्र बिक्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रतिसुरक्षा सहयोग एजेन्सीले एक वक्तव्यमा दक्षिण कोरियालाई छ वटा पोसीडान नामक लडाकू बिमान दुई अर्ब १० करोड डलरमा बिक्री गर्न लागिएको छ । साथै, करिब ५० करोड १० लाख मूल्यमा ६४ वटा प्याट्रिओट क्षेप्यास्त्र र त्यससँग सम्बन्धित अन्य उपकरण बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसले उक्त सौदाबाजीमा विमती जनाउन वा रद्द गर्न सक्दछ तर सिओल र वासिङ्टनबीचको प्रगाढ सम्बन्धका कारण यस सम्झौतामा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।
पी–८ए सिरिजको बोइङले निर्माण गरेका यी लडाकू जहाजहरु खासगरी जासुसी र हवाई प्रत्याक्रमणमा प्रयोग हुनेछन् ।
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच वार्ताको सिलसिला जारी रहेकै अवस्थामा हुन लागेको यो सौदाबाजीले उत्तर कोरियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ । - रासस/एएफपी
'चन्द्रमामा पर्यटक लैजाने स्पेसएक्सको नयाँ योजना'
9/14/2018 06:33:00 PM विज्ञान/प्रविधी
लस एन्जलस, भदौं २९ गते । स्पेसएक्सले बीग फाल्कन रकेट (बीएफआर) को प्रयोग गरी चन्द्रमाको परिधिमा पर्यटक लैजाने नयाँ योजना बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । अन्तरिक्षमा पर्यटकलाई लैजाने गरी बीएफआरमा व्यापक सुधार सहित डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्पेसएक्सले हाल अन्तरिक स्टेसनका लागि सामान लैजान नासासँग एक अर्ब ६० करोड डलरको सम्झौता गरेको छ । स्पेसएक्सले नयाँ डिजाइन गरेको बीएफआरमा ३१ वटा इन्जिन रहेका र यसले १५० टन भारी बोक्न सक्दछ । (रासस/एएफपी)
स्पेसएक्सले हाल अन्तरिक स्टेसनका लागि सामान लैजान नासासँग एक अर्ब ६० करोड डलरको सम्झौता गरेको छ । स्पेसएक्सले नयाँ डिजाइन गरेको बीएफआरमा ३१ वटा इन्जिन रहेका र यसले १५० टन भारी बोक्न सक्दछ । - रासस/एएफपी
9/14/2018 06:25:00 PM धर्म
काठमाडौँ, भदौं २९ गते ।' काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ टेकुस्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा सप्तऋषिको दर्शनका लागि आएका भक्तजनले सामाजिक चेतनाका गीत प्रस्तुत गरेका छन् ।
9/14/2018 06:23:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
“गोरखा र लमजुङमा भेटिएको नक्कली नोेटको नम्बर एउटै भएको जानकारीमा आएको छ,” प्रजिअ भट्टराईले भन्नुभयो । सूचना लुकाएर राख्दा आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भएकाले समयमै खबर गर्न उहाँले बैंकलाई निर्देशन दिनुभएको छ । - रासस
9/14/2018 06:21:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
9/14/2018 06:18:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काम गरी खाउँ, सङ्घीयतामा जाउँ
9/13/2018 10:54:00 AM विचार
नेपालमा पुँजीवाद आएको पक्का हो तर यो पुँजीवाद चिचिलो आँप जस्तो छ । स्वाद पटक्कै नभएको आँप । अहिले यो खानै नहुने गरी तीतो र टर्रो छ । भोलि यो केटाकेटीलाई बिरामी बनाउने चर्को अमिलो हुनेछ । पर्सी मात्र यो खान लायक हुन्छ । सङ्घीयता त त्योभन्दा परको कुरा हो । नेपालमा छलाङ भन्ने शब्द धेरैका लागि प्रिय छ । सङ्घीयता हाम्रो देशको त्यही छलाङ हो । त्यसैले यो अहिले चिचिलो आँपजस्तो छ – तीतो र टर्रो । न ल्याउनेले बुझे, न अधिकार पाएकाले बुझे ।
तर आमाको स्याहार पायो भने सात महिनामा जन्मिएको बच्चा पनि बाँच्छ । हो, आमालाई अलिक दुःख हुन्छ । नौ महिना पूरा भएर जन्मिएको परिपक्व बच्चालाई भन्दा कता हो कता बढी स्याहार गरेर त्यसलाई नौ महिनाको परिपक्व बालक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सरकार आमा हो र सङ्घीयता त्यही अपरिपक्व बालक हो । यो बालकलाई बचाउने कि मार्ने भन्ने जिम्मा राजनीतिक दल र सरकारको मात्र होइन, आम जनताको पनि हो । यसलाई उडाएर, निचोरेर मार्न पनि सकिन्छ । सबै मिलेर स्याहार गरेर बचाउन पनि सकिन्छ । निर्णय मूलरूपमा जनताले गर्ने हो । नेता वा राजनीतिक दलले होइन ।
बौद्ध जोरपाटीको हिले सडकको खुबै चर्चा भयो । सबैले केन्द्रीय सरकारलाई सरापे । महानगरको बाटोमा ढुङ्गामाटो पुर्ने काम केन्द्रीय सरकारको होइन, महानगरपालिकाको पनि होइन । त्यो जिम्मेवारी वडा सरकारको हो । केन्द्र वा महानगरले ढुङ्गामाटोको बजेट दिएनन् भने उनीहरूसँग रिसाउने, उनीहरूको विरोध गर्ने हो । तर वडा सरकारलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान गराउने काममा निश्चय नै केन्द्र र महानगरको कमजोरी हो । सात महिनामा जन्मिएको बच्चालाई स्याहार्ने भन्दा मार्ने खालको काम भयो यो । यसका लागि माथिका निकायहरू आलोच्य छन् । तर काम त तलबाटै गरिनुपर्छ । यो उनीहरूको अधिकार हो ।
अहिले सरकार एक्लो छ । त्यसमाथि दलाल पुँजीवादको चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । सरकार राष्ट्रिय पुँजीवादीको हुन सकिरहेको छैन अहिले । त्यसैले आक्रमणको प्रतिकार स्वयं सरकारले गर्नुपरिरहेको छ । ‘प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचमा ठाकठुक, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको पद धरापमा, प्रधानमन्त्रीले काठमाडांैका मेयरलाई हकारे, मेयरको पद धरापमा’ जस्ता समाचार शीर्षकहरू अहिले छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् र यी सबै झुटा हुन् । प्रचण्ड र केपीको झगडा कसले सुनेको थियो ? थाहा छैन । अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गाली गरेको विरोधमा सत्याग्रह गरेका छैनन् । काठमाडांैका मेयरलाई गाली गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन दफाले दिएको छ ? जानेर होस् अथवा नजानेरै होस् – सङ्घीय सरकारका पदाधिकारीले गाली गर्ने अधिकार खारेज भइसकेको समय हो । अहिले जनता बलिया भएका छन्, नेता कमजोर भएका छन् । अहिले जनता ‘यी यी कारणले गर्दा हामी यो बढेको कर तिर्दैनौ’ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् भने सङ्घीय सरकार ‘हामीले यी यी काम गर्नुपर्ने भएकाले हे आदरणीय नागरिक तपार्इंहरूले यो कर तिर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ’ भनेर निहोरा गर्ने ठाउँमा छ । सङ्घीयता सिंहदरबारको शासन होइन, त्यो समुदायको अर्थात् स्थानीय सरकारको शासन हो । तर नेपालमा यो कुरो न सङ्घीय सरकारले बुझेको छ, न स्थानीय सरकारले नै बुझेका छन् । अहिलेको नेपालका सङ्घीय नेताले त यो कुरो नमरुन्जेल बुझ्दैनन् तर जनताले यो कुरो बुझ्नुपर्छ ।
समाजवादको कुरो कसैले नगरौं । यो हावा कुरा हो । सात महिनामा जालोसहित जन्मिएको बच्चालाई नौ महिनाको परिपक्व बालक नबनाउन्जेल, समाजवाद गफ बाहेक अरू केही हुँदैन । हामी अहिलेसम्म समाजवादतिर जाने बाटो पनि खनिरहेका छैनौं । अहिले त नेपालमा सिण्डिकेटको राज छ । धम्कीको राज छ । हिंसाको राज छ । घृणाको राज छ । यी सबै पुँजीवादका अवयव हुन् । सबैभन्दा पहिले सरकार संविधानको धरातलमा उभिन सक्नुप¥यो । संविधानमा समाजवादउन्मुख विषयहरू छन् । अहिले कलिलो पुँजीवाद छ । के बेलायतका अस्पतालमा डाक्टरले बिरामीलाई गाली गर्न पाउँछन् ? पाउँदैनन् । के उनीहरूले बिरामीको बेवास्ता गरेर सेवा बन्द गरेर हड्ताल गर्न पाउँछन् ? पाउँदैनन् । तर यहाँ त व्यक्ति होइन, एसोसिएशनले नै सेवा बन्दको घोषणा गरेर सरकारलाई निहुराउने फोहोर काम गरेको छ । यस्तो कुरो समाजवादउन्मुख मुलुक त के, बलियो पुँजीवादी मुलुकका एसोसिएशनहरूले समेत कल्पना गर्न सक्दैनन् ।
नेपालका समाचारहरूमा युरोपका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरूको तुलना नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग गर्न थालेका छन् । तुलना राम्रो । तर त्यो तुलनामा नेपालका पदाधिकारीप्रति जुन घृणा पोखिएको हुन्छ त्यो भत्र्सनायोग्य छ । जालोसहित जन्मिएको च्याँसे बालकजस्तो नेपाल र परिपक्व पुँजीवाद, जसको गर्भमा समाजवादको भ्रूण पलाइसकेको छ त्यस्ता राज्यका पदाधिकारीहरू तुलना गरेर छि ! भन्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन । बच्चा स्याहार्ने हो, कमजोरी हटाउने हो । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उदाहरण प्रशंसा गर्न लायक छ । यो उदाहरण, सङ्घीय सरकारले सिकोस् पहिले । राष्ट्रपतिको जस्तै काम ऊर्जामन्त्रीबाट भएछ । यो हो सात महिने च्याँसे बालक स्याहारेको सही उदाहरण । राष्ट्रपतिबाट सिकुन् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले । यो मेरो शुभकामना मात्र हो । शुभकामना दिने बाहेकको अधिकार अहिले मसँग छैन ।
परिपक्व पँुजीवादका दुई उदाहरण यहाँ पस्किन मन लागेको छ मलाई, जसको गर्भमा समाजवाद सल्बलाईरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई । उदाहरण हो फिनल्याण्डको । शिक्षामन्त्री थिएँ म त्यतिबेला । फिनिस शिक्षामन्त्रीसँग भेटघाटको समय तोकिएको थियो । हामीलाई लिन आउने साथीले सोधे मलाई– तपाईंलाई साइकल चलाउन आउँछ ? मैले आउँछ भनिनँ । त्यसो भए हिँड्नुपर्छ । म पनि हिँडेरै जाउँला । ’
म र फिनिस शिक्षामन्त्री सँगैजस्तो भेटघाट गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । उनी सरररर साइकलमा आएकी थिइन् । म छक्क परिनँ । किनभने मैले यस्तै अनुमान गरेको थिएँ । मेरो दोस्रो भेटघाट शिक्षक सङ्गठनको महासचिवसँग थियो । युवा महिला थिइन् तिनी । कुराकानीको सन्दर्भमा मैले शिक्षक हड्तालको कुरा सोधें । किनभने हड्तालले मेरो टाउको खाएको समय थियो त्यो । तिनी छक्क परिन् र हाम्रो सहयोगीतिर हेर्न थालिन् । उनले भने, ‘मिस्टर मिनिस्टर, फिनल्याण्डमा शिक्षक हड्ताल भन्ने कुरो अब कल्पनाजस्तो भइसकेको छ । यिनी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै हड्ताल शब्द समाप्त भइसकेको थियो । विद्यार्थी जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई दिन सकिंदैन । ’
‘अनि शिक्षकको अधिकार ?’
‘त्यो व्यवस्थापनसँग छलफलको कुरा हो । ’
यस्तो व्यवस्थाको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं नेपालमा ? सक्नुहुन्न ।
सङ्घीयता चाहियो चाहियो भन्ने बहुसङ्ख्यक नेताहरू अहिले मानसिक सङ्कटमा छन् । उनीहरूलाई पनि यतिबेला सङ्घीयता मन पर्न छाडेको छ । उनीहरूले बुझेको सङ्घीयता थियो महेन्द्रपथीय सङ्घीयता । सिंहदरबार, पाँच प्रदेश, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला, नगर र गाउँ पञ्चायत । तर तिनले हेर्दाहेर्दै यो सङ्घीयताले अर्कै बाटो लियो । उता आत्मनिर्णयसहितको प्रदेश सरकारको काल्पनिक सरकार पनि यो बन्न सकेन । यसले आम नागरिकसँग जोडिएका सम्पूर्ण मुद्दा पर्घेल्ने अधिकार सिधै स्थानीय सरकारलाई दियो । यसो गरेर त्यसले राम्रो काम ग¥यो ।
अहिले नै नेपाल फिनल्याण्ड अथवा स्वीटजरल्याण्डको चेतनामा पुग्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन । तर सङ्घीयताबाट फर्किने त कल्पना पनि नगरे हुन्छ । त्यसैले हामीले, हाम्रा पार्टीहरूले मूलतः स्थानीय सरकारलाई अधिकार र कर्तव्यका बारेमा गहन प्रशिक्षण दिएर मुलुकको रक्षा, संवर्धन र विकासको बाटोमा अघि बढाउनुको कुनै विकल्प छैन । - प्रदीप नेपाल, गोरखापत्र दैनिकबाट
9/13/2018 10:47:00 AM समाचार
बोस्टन(संयुक्त राज्य अमेरिका) भदौ २८ गते । अमेरिकाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा बिहीबार साँझ वा शुक्रबार बिहानसम्ममा फ्लोरेन्स नामक विशाल आँधीबेहरी आउने अनुमान गरिएको छ ।
करिब दुई दशकपछि यस क्षेत्रमा आउँदै गरेको यो शक्तिशाली आँधीबेहरी हो । यो आँधीलाई क्याटागोरी –४ र सोभन्दा पनि माथि पुग्नसक्ने सम्भावना आंैल्याइएको छ । १५७ माइल अर्थात् २१५ किमी प्रतिघन्टाको गतिले आउने यो तुफानले बिजुलीका खम्बा लडाउने छ, तार छिन्नभिन्न बनाउने भएकोले करिब एक महिनासम्म यसको पुनस्र्थापना गर्न असम्भव प्रायः छ ।
फ्लोरेन्स नामक सो आँधीले अमेरिकाका तीन राज्य नर्थ क्यारोलिना, साउथ क्यारोलिना र भर्जिनियामा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अकल्पनीय रूपमा धेरै धन जनको विनाश हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यी तीनै राज्यका विशेषतः सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब १७ लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यी तीनै राज्यमा आपतकालीन स्थितिको घोषणा गर्नुभएको छ । - कृष्णराज खनाल, गोरखापत्र दैनिकबाट
9/12/2018 12:43:00 PM स्वास्थ्य
करिब २५ अलिक दुब्लो एक व्यक्ति ओपिडीमा आउछन् छालाको एलर्जीको समस्याले। गाउँघरमा छालाको एलर्जीमा मासु खान हुन्न भनेको भरमा उनले मासु लगायत आलु, दाल, भेन्टाहरू नखाएको करिब तीन वर्ष भएछ। पहिलो नजरमा नै भन्न सकिन्छ कि उनी छालाको एलर्जीले भन्दा पनि पौष्टिक आहारको कमीले पीडित छन्।
करिब पाँच वर्षको बच्चालाई जिउमा केही डाबर आएको छ। चार–पाँच दिनदेखि आफन्तको सल्लाहमा कुनै घरेलु औषधिलाई उमालेर त्यसको झोल ख्वाइन्छ। परिणाम बच्चालाई जिउभरि झन् धेरै एलर्जी आउँछ र अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्दछ।
यी त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता घटना हाम्रो दैनिक चिकित्सकीय अभ्यासमा धेरै देखिन्छ।
प्रस्तुत लेखमा छालाको विभिन्न रोगहरूमा हामीले खाने खानासँगको सम्बन्ध देखाउने कोसिस गरिएको छ।
सिउडोएलर्जिन फ्री डाइट – सिउडोएलर्जिनको प्रयोग खानाको स्वच्छता कायम राख्नका लागि अथवा खानालाई रंगीन बनाउन प्रयोग हुन्छ। जो तयारी अथवा लामो समयसम्म भण्डारण गर्नुपर्ने खानामा हुन्छ। त्यस्ता खानाहरूको कमभन्दा कम प्रयोगले एलर्जीका बिरामीलाई फाइदा भएको अध्धयनले देखाएको छ। अर्थात्, घरमा आफैले पकाएको स्वच्छ र ताजा खानाको नियमित प्रयोग।
अरोमेटिक कम्पाउन्ड्स – यस्ता रसायनयुक्त खानेकुरा दूध, अन्डा, चीज, मक्खन, पाउरोटी, पास्ता, मह, गोलभेँडा, पालुंगो, मकै जस्ता खाने कुरामा पाइन्छ। तर यी खानेकुरा सबै छोड्नुस् भन्ने लेखकको आसय होइन।
प्रोबायोटिक्स तथा प्रिबायोटिक्स – प्रोबायोटिक्सहरू जिउँदा किटाणुहरू हुन्, जसको सेवनले शरीरमा फाइदा हुन्छ। प्रिबायोटिक्सहरू त्यस्ता खाद्यपदार्थ हुन्, जसले आन्द्रामा फाइदाजनक किटाणुको मात्रा बढाउँछ। यिनीहरूको सेवनले आन्द्रामा भएका किटाणुहरूको संवेदनशीलतालाई परिवर्तन गर्नुका साथै आन्द्राका सुजनलाई कम गरी एटोपिक डर्माटाइटिसमा सहयोग गर्छ। - डा कमलराज धिताल ,स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
(चर्म यौनरोग विशेषज्ञ डा धिताल अरोगिन हेल्थ एन्ड रिसर्च सेन्टर विशालनगरमा कार्यरत छन्।)
9/12/2018 12:27:00 PM स्वास्थ्य
महिनैपिच्छे प्याड किन्नुपर्दा एक त झन्झट हुन्छ त्यसमथि करिब दुई सय रुपैंयाको त महिनामा प्याड किन्नमै जान्छ । यसरी वार्षिक रूपमा धेरै पैसा खर्च भइराखेको हुन्छ । यो एक पटक किनेपछि १२ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । करिब दुई हजार रुपैयाँमै किन्न सकिने भएकाले आर्थिका भार पनि कम हुन्छ । मेरी स्टोप्स नेपालले अहिले ‘बाई–बाई प्याड’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ । यो प्याड मेरी स्टोप्स सेन्टर तथा विभिन्न मार्टहरूमा पनि किन्न पाइन्छ । - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
9/12/2018 12:17:00 PM स्वास्थ्य
ब्रतको बसेको अवस्थामा छिनछिनमा पानी पिउने , शारिरिक रुपमा धेरै सक्रिय नहुने, आराम गर्ने, सितल वातावरणमा बस्ने, निरन्तर खाइरहनुपर्ने औषधिहरु छन भने समयमै खाने, शरिरको शक्ति वढी खर्च हुने कामहरु नगर्ने तथा व्रत सकिने बितिक्कै खाइने खानामा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
- सगुन पौडेल, स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
9/12/2018 12:13:00 PM खेलकुद
पोखरा, भदौ २७ गते । गत वर्षको विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र उपविजेता न्यू डायमण्ड एकेडेमी यस वर्षको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज भिड्ने भएका छन ।
प्रतियोगिताको विजेताले रु एक लाख तथा उपविजेताले रु ६५ हजारसहित ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रचार–प्रसार संयोजक धर्ममानसिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगितामा पाँच टिमको सहभागिता रहेको छ । - रासस
9/12/2018 12:11:00 PM खेलकुद
समूह चरणमा भुटानविरुद्ध ४–० गोल र बलियो बङ्गलादेशविरुद्ध २–० गोल अन्तरले विजयी भएको नेपाली टोली माल्दिम्भविरुद्ध जित हात पार्दै इतिहास रच्ने दाउमा छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कार्यवहाक मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले नेपाली टोली पछिल्लो समय लयमा रहेकाले फाइनल पुग्ने बताउनुभयो । नेपालले माल्दिभ्सलाई हराउन सके इतिहास रच्नेछ । यसअघि नेपाल चार पटक सेमिफाइलनसम्म पुगिसकेको छ । - रासस
बाह्र करोडको सामाग्री बरामद
9/12/2018 12:02:00 PM समाचार
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । नेपाल प्रहरीले भन्सार छलेर नेपाल ल्याउँदै गरेको रु ११ करोड ९५ लाख ५२ हजार बराबरको सामग्री बरामद गरेको छ । प्रहरीले वैशाखदेखि साउनसम्मको अवधिमा विभिन्न भन्सार नाकाबाट भन्सार छलेर नेपाल ल्याउँदै गरेको उक्त सामग्री बरामद गरेको हो । प्रहरीले विभिन्न शीर्षकमा रु ३८ करोड ९७ लाख ११ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष वैशाखदेखि साउनसम्मको अवधिमा रु ३१ करोड ८९ लाख सात हजार राजश्व सङ्कलन भएको प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
चार महिनाको अवधिमा दुई हजार १८१ प्रहरीको बढुवा, २४ हजार ६१३ प्रहरीको सरुवा, एक हजार ३५३ प्रहरी पुरस्कृत तथा ४९५ प्रहरीलाई सजाय दिइएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मन्त्रालयबाट जारी गर्नुभएको गृह प्रशासन सुधार योजनामा समावेश ८२ बुँदे प्राथमिकता तथा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी सङ्गठनलाई मजबुद तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि जारी गर्नुभएको १० बुँदे प्राथमिकतालाई आधार मानेर काम गरेका कारण प्रहरीले ठूलो सफलता प्राप्त गरेको प्रवक्ता क्षेत्री बताउनुहुन्छ । चार महिनाकै अवधिमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९विप्लव० तथा सिके राउत समूहका १५८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । - रासस
9/12/2018 11:23:00 AM धर्म , मुख्य समाचार
9/05/2018 05:10:00 PM खेलकुद
9/05/2018 05:04:00 PM समाचार
मनाङ, भदौ २० गते । मनाङको नाशोङ गाउँपालिका–२ नाचे गाउँ र वडा नं ५ को थोंचे गाउँ जोड्न ड्रोनाखोलामा निर्माण गरिएको ताम्राङ पुल नेपालकै अग्लो भएको प्राविधिकले दाबी गरेका छन् । खोलाको पानीको सतहदेखि ४१२ मिटर उचाइमा रहेको यस पुलको लम्बाई १३५ मिटर रहेको छ ।
चीनका ती चारवटा पुलपछि ड्रोनाखोलामा निर्माण भएको पुल नै अग्लो भएको दाबी स्थानीयवासीको छ । हालसम्म नेपालको अग्लो झोलुङ्गे पुल भनेर चिनिएको पर्वत कुश्माको पुलको उचाइ जम्मा १६६ मिटर छ । ‘हामीले प्राविधिक हिसाबले नै नापजाँच गरेका हौँ । पुलको वास्तविक उचाइ ४१२ मिटर छ, इञ्जिनीयर पाण्डेयले भन्नुभयो, “अब यसको प्रचार देशभरि गर्नुपर्छ । यसले पनि मनाङको पर्यटन बढाउन सहयोग गर्छ ।”
‘‘हामीलाई हाम्रो सम्पत्ति नै थाहा भएन । नत्र पहिले नै प्रचार गरिसक्थ्यौं,’’ नाशोङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, “विकट जिल्ला र अशिक्षाका कारणले पनि पछि परिरहेका छौं ।” गाउँलेलाई हिँडडुल गर्न चार वर्षअघि यस पुल बनाइएको हो । मनास्लु पदमार्गमा पर्ने झोलुङ्गे पुल लार्के पास र भोटमा नुन लिन जाने पुरानो बाटो पनि हो ।
खोलामा पुल नहुदा धेरै सास्ती ब्यहोरेको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताउनुभयो । पुललाई सम्पदाको रुपमा स्थापित गरिदिन आग्रह गर्दै उहाँले तिलिचो तालजस्तै यस पुललाई पनि विश्वमा चिनाउन सकिने भएकाले यसको प्रचारप्रसार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । - रासस
9/05/2018 04:58:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौँ, भदौ २० गते । नेपाल आयल निगमले एल.पी ग्यासको घाटा कम गर्न व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने ग्यासको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । दुई रङको सिलिण्डिर लागू गरी रातो रङको घरायसी प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने र नीलो रङको व्यावसायिक प्रयोजनका लािग प्रयोग गर्न दिने तयारी भएको निगमले जनाएको छ ।
मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने ग्यासको मूल्य घरायसी प्रयोजनको ग्यासभन्दा महँगो बनाएर घाटा कम गर्नुपर्ने बताएको हो । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भन्नुभयो, ‘नीलो रङको सिलिण्डर व्यवसायका लागि खपत गर्ने र त्यसको मूल्य पनि वृद्धि गर्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि मूल्य यथावत राख्ने तयारी छ । त्यसका लागि हामीले पहिला खपतको प्रतिशत पत्ता लगाउँदैछौँ, ग्यास व्यवसायीसँग तथ्याङ्क मागिएको छ, तथ्याङ्क आएपछि हामी अघि बढ्छौँ । ’
निगमका अनुसार खाना पकाउने एल.पी. ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३३२ रुपियाँ घाटा छ । महिनाका ८० करोड रुपियाँ एल.पी. ग्यासबाट घाटा भइरहेको भट्टराईले दावी गर्नुभयो । एक महिना अघि निगमलाई एल.पी. ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २८० रुपियाँ घाटा थियो भने हाल बढेर ३३२ रुपियाँ पुगेको उहाँले बताउनुभयो । एल.पी. ग्यासबाट बाह्रै महिना घाटा व्यहोरिरहेको निगमले दीर्घकालीन समाधान गर्न सुझाएको छ । भट्टराई भन्नुहुन्छ– ‘‘एल.पी. ग्यासको दीर्घकालीन समाधान जरुरी छ, सधैँभरि घाटा व्यहोरिरहन सम्भव पनि छैन, समयअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ’
भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट भदौ १५ गते प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमललाई पेट्रोल र डिजेलबाट पनि घाटा भएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपियाँ ११ पैसा र डिजेलमा २ रुपियाँ ८४ पैसा घाटा भइरहेको छ । सो घाटा महिनामा झण्डै ९५ करोड रुपियाँ हुन आउँछ । घाटा व्यवस्थापन नै निगमको मुख्य चुनौती रहेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर २६ रुपियाँ ७७ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर २८ रुपियाँ ८० पैसा नेपाली बजारमा सस्तो भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको निगमले जनाएको छ । अमेरिकी डलर नेपाली मुद्राको लगातारको अवमूल्ययनले गर्दा निगमलाई नकारात्मक प्रभाव परी दिन प्रतिदिन लागत खर्च बढिरहेको निगमले जनाएको छ । २० दिन अघि अमेरिकी डलर सटही दर करिब ११० रुपियाँ थियो भने हाल ११४ रुपियाँ पुगेको छ । निगमका अनुसार कच्चा तेलको प्रतिब्यारेल मूल्य अमेरिकी डलर एकमात्र बढ्दा महिनामा करिब १७ करोड रुपियाँ अतिरिक्त भार पर्दछ । - गोरखापत्र दैनिकबाट
यस्तो छ सरकार र डाक्टरहरुबीच हुन लागेको सहमतिको ड्राफ्ट
9/04/2018 05:56:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौं , भदौ १९ गते। सरकार र आन्दोलनरत डाक्टरहरुबीच सहमति हुने लगभग निश्चित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चलेको ३ घण्टा भन्दा लामो छलफलपछि सहमतिको मस्यौदा तयार भएको हो।
दुवै पक्षबीच सहमति अनुसार तयार पारिएको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा देखाएपछि हस्ताक्षर हुने भएको छ।
यी ५ बुँदामा सहमति हुँदै छ :
१ं. दफा २३० मा रहेको अनुभवको आधारमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने।
२. उपचारका विषयमा कसैले उजुरी गर्न चाहेमा ६ महिनाभित्र उजुरी हाल्नुपर्ने।
३. डिउटीमा रहेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हातपात गर्नेलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने अर्थात जेल विथआउट बेलको व्यवस्था लागू गर्ने।
४. स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्नेलाई पनि जेल विथआउट बेलको व्यवस्था लागू हुने।
५. हेलचक्राइ, लापरबाही भएको विषयमा सम्बिन्धत काउन्सिलले छानविन गरेर प्रतिबेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने। - डी बि खड्का , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ - वरिष्ठ नेता पौडेल
9/04/2018 05:46:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
तनहुँ, भदौ १९ गते । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले व्यक्तिलाई होइन संगठनका कामलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
रिपोटर्स क्लब नेपालले आज दमौलीमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी सभापतिको लागि आफ्नो कसैसँग तालमेल भएको छैन भन्नुभयो । “ म व्यक्तिलाई होइन पार्टी र संगठनका कामलाई प्राथमिकता दिन्छु, संगठन बलियो भए मात्र पार्टीमा सबैको हित हुन्छ,” वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गरेर विकासका कामलाई प्राथमिकतामा राखी काम गनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विकासका योजनालाई केन्द्रीकरण होइन सङ्घीयता सृदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रीत गर्नुपर्छ भन्नुभयो । मुलुकी संहिता २०७४ कुनै पार्टी विशेषले नभइ सबै पार्टीले बनाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वरलाई संशोधन गरी सुधार गर्दै लानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । - रासस
‘नेपालको क्षेत्रीय कूटनीतिमा थप प्रभावकारिता वृद्धि’
9/04/2018 05:44:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौँ, भदौ १९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावकारी गतिविधिबाट एकार्का राष्ट्रबीच भावनात्मक सम्बन्धको विकास, समस्या समाधानमा एकताको जागृति र सामूहिक काममा सहकार्यको भावना कायम भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै काठमाडौँमा चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन समापनपछि म्यानमा र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति तथा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा औपचारिक ढङ्गले छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा जारी १८ बुँदे घोषणापत्र कार्यान्वयनमा बिम्स्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखसँग बेग्लाबेग्लै औपचारिक छलफल हँुदा एक देशविरुद्ध हुने आतङ्कवादी क्रियाकलाप हुन नदिने, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहने र अहस्तक्षेपकारी सिद्धान्तलाई परिपालन गर्ने महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
रक्सौल–वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग अध्ययन गर्न भएको समझदारी, नेपाल–भारत मैत्री पशुपतिनाथ धर्मशाला उद्घाटन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्ठा र सामथ्र्य स्थापना र नेपालको क्षेत्रीय कूटनीतिमा थप प्रभावकारिता बढेको उहाँले प्रतिनिधिसभालाई बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनले बिजुली बिक्री गर्ने बाटो खोलेको बताउँदै भन्नुभयो, “सहयोगका १४ क्षेत्र पुनःसंरचना गर्ने, बौद्ध परिपथ स्थापना गर्ने, सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्ने सहमति हुनुले सम्मेलन सफल भएको बताउँछ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सीमित स्रोत र साधनका बीच अधिकतम रुपमा परिचालन भई छोटो समयमा सफलता हासिल गर्न सहयोग गर्ने नेपाली जनता, सुरक्षा निकाय र बौद्धिक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनुभयो ।
बिम्स्टेक सार्कको विकल्प होइन - प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई विस्थापित गर्न स्थापना नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्यपछि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक सम्मेलनमा कुनै देशकोे नेतृत्वमा सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति नभएको पनि बताउनुभयो ।
एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाढीपीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, रामबहादुर विष्ट, अवधेशकुमार सिंह, भरतकुमार शाह, राजेन्द्रकुमार केसी, मीन विश्वकर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सञ्जयकुमार गौतम, सरिता गिरी, मीना सुब्बा र महेन्द्रराय यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्मेलनका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । (रासस)
9/04/2018 05:42:00 PM समाचार
9/02/2018 04:34:00 PM विचार
9/02/2018 04:29:00 PM खेलकुद
काठमाडौं , भदौ १७ गते। मलेसियामा जारी एसीसी एसिया कप छनोट प्रतियोगिताको चौथो खेलमा नेपालले सिंगापुरमाथि ४ विकेटको जित निकालेको छ। सिंगापुरले दिएको १५२ रनको लक्ष्य नेपालले २८.१ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । जितका लागि ४ रन आवश्यक हुँदा नेपालले दीपेन्द्रसिंह ऐरी र सागर पुनको विकेट गुमाएको थियो ।
यो सँगै एसिया कप छनोटमा नेपालले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। कम्तिमा अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै एसिया कपमा छनोट हुने आशा जीवितै राखेको छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले ४२ ओभरमा अल आउट हुँदै १५१ रन बनाएको थियो । नेपालको जितका लागि अनील शाहले सर्वाधिक ४३ रन बनाए । दीपेन्द्रसिंह ऐरी ३३ र ज्ञानेन्द्र मल्लले ३० रनको योगदान गरे ।
अब नेपालले प्रतियोगिताको अन्तिम खेल मंगलबार हङकङविरुद्ध खेल्नेछ । नेपाललाई एसिया कपमा छनोटका लागि हङकङमाथि जित हात पारेर मात्रै पुग्दैन । अन्य टोलीको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो खेलमा ओमानसँग ७ विकेट र दोस्रो खेलमा युएईसँग ७८ रनले पराजित भएको नेपालले तेस्रो खेलमा आयोजक मलेसियामाथि १९ रनको जित निकालेको थियो ।
9/02/2018 03:52:00 PM मुख्य समाचार , समाचार